Ingabe kuyiqiniso ukuthi i-Amazon com iyinjini yokusesha emisha yemikhiqizo?
Ngezinye izikhathi ngizwa abantu bethi i-Amazon com iyinjini yokusesha elisha eyenzelwe imikhiqizo, kunokuba ichazwe ngokuzenzakalelayo njengendlela yokugcina umhlaba ehamba phambili e-ecommerce kanye ne-drop-shipping-online business. Ngakho-ke, yeka ukuthi lokhu kuyiqiniso kangakanani ukucabanga ukuthi ama-Amazon aguquke engozini yokusesha imikhiqizo - engokoqobo nakakhulu kunalokho esingacabanga? Ngenhlanhla, nginezitatimende ezithandekayo ezivela ekucwaningweni kwakamuva mayelana nobuchwepheshe bokuthengisa inthanethi. Lolu cwaningo luthiwa lwenziwa ngamazwe amane ahlukene futhi ahlanganisa ukusetshenziswa kwe-esitolo ngesikhathi esifanayo. Futhi ngezansi ngizokukhombisa imiphumela emnandi futhi uzame ukuphendula umbuzo oyinhloko kule ndaba.
Abantu abaningi futhi abaningi basebenzisa ama-Amazon njengenjini yokusesha ngolwazi lomkhiqizo. Ngokwenhlolovo, ucwaningo lokuthengisa lwakhiphe abathengi abayizinkulungwane abavela e-United States, kanye nabathengi abahlobene nabo baseJalimane, e-United Kingdom naseFrance - nabangaba yizinkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa abaphenduliwe ezweni ngalinye (lingu-2017 Agasti):
Abadobi abangaphezu kuka-70% abavakashela i-Amazon kuqala futhi okubaluleke kakhulu, uma kuziwa ekufundeni okuningi ngomkhiqizo othile (njengamanani aqobo, ukubuyekezwa kwamakhasimende, imininingwane yomkhiqizo, amaphuzu okusebenzisa izinhlamvu, njll) ngaphambi kokuthatha ukugcina kwabo isinqumo sokuthenga.
Abasebenzisi abangaba ngu-25% abasebenza ngokuphequlula emkhakheni wokuthengiswa kwe-intanethi baqinisekisile ukuthi baya e-Amazon ukuthola okwengeziwe ngomkhiqizo abawudinga, bafunde izici zayo, amanani ajwayelekile nanoma yiziphi ezinye izakhiwo - njengokungathi babesitolo sangempela sezitini ne-mortar.
Mayelana namaphesenti angu-55 wabathengi abakhuthele e-Amazon bavuma ukuthi basebenzisa ukucinga kwabo kokuqala komkhiqizo ngqo lapho, mayelana nanoma imuphi umkhiqizo otholakala ekudayisweni.
Ngokucabangela ukuthi i-Google isathatha cishe u-85% womcwaninga wamakhasimende ahlobene nomkhiqizo, igebe lingase likwazi ukuvala noma kunjalo, ngaphandle kokuhamba okusheshayo okulindelwe.
Kukhona ohlangothini olusha lwezokuthengisa ezithengisiwe ngebhizinisi le-ecommerce kanye nomkhiqizo wokuthutha ukuthumela phansi ngokukhethekile. Ngokuqondene ne-Amazon ngokwayo, le ndawo emakethe ye-digital eyaziwa kakhulu eyaziwayo ekhombisa ukuthi ama-smartphones ashintsha indlela esithenga ngayo. Kusho ukuthi abathengi abaningi abakhuthele bavumelanisa ngokushesha nentuthuko yamanje ekusesheni kweselula. Futhi i-Amazon com ne-search yayo kanye namaphethini algorithm agxile kumkhiqizo akuyona ukukhishwa kulo mthetho. Kusho ukuthi yonke imiqondo yanamuhla noma ukuthengiswa kanye nokukhuthazwa kwe-inthanethi kuvame ukushintsha.
Masibhekane nakho - amaphethini ajwayelekile wokuziphatha kwabathengi asanda kuguqulwa ngokwezinga elithile. Ngisho ukuthi wonke ama-shopper ajwayelekile manje manje angakwazi ukwenza umbono wakhe nokwakha ukwethemba ngokulindelwe ukubuyekezwa komkhiqizo nolwazi lonke olutholakala ku-intanethi, kunokuthembela kubasebenzi bokuthengisa abaphilayo. Futhi kungakhathaliseki ukuthi labo basebenzi bangaba nolwazi kangakanani - imboni yanamuhla yokuthengisa isenayo ukuguguleka okuphelele okulinganiselwe kwezindawo zayo zangokwenyama, izikhala kanye namaphuzu okuthengisa Source .